स्प्रिंग फेस्टिवल इनाममा अपरिहार्य इनाम प्रणालीको कारण, भोजन सेवा Ele. Me कठोर आलोचनाको सामना गर्दैछ - Pandaily
Categories: वर्गविहीन Xintian Wang फ्रेवुअरी 20, 2021 फ्रेवुअरी 22, 2021 मा पोस्ट
एल। एमईको श्रम विवादको वरिपरी चीनको प्रमुख डिलिवरी सेवा कम्पनीले एकपटक फेरि ध्यान केन्द्रित गर्यो। अपरिहार्य प्रोत्साहन प्रणालीको समयमा अज्ञात उजुरी कम्पनीमा माइक्रो ब्लगिंगमा धेरै कूरियर अफिसहरू, ले. me ले कल, सम्भावित डिलिवरी आदेशहरूको संख्या दुरुपयोग गर्न माफी माग्यो, र प्रणालीको मरम्मत गर्न प्रतिज्ञा गरे।
चीनको यात्रा प्रतिबन्ध कार्यक्रमको समर्थन गर्न, जो नयाँ मुकुट निमोनिया प्रकोप रोक्नको लागि डिजाइन गरिएको एक उपाय हो, Ele. Me लाई पानीमा बस्न खाना पठाउने चालकलाई प्रोत्साहित गर्दछ, छुट्टिको समयमा काम जारी राख्नुहोस्। उनीहरूले यो इनामहरू प्राप्त गरेर,49-दिनको इनाम कार्यक्रम सिर्जना गरे, सात हप्ताको चक्रको लागि विभाजित भयो र अलग डिलिवरी लक्ष्यहरू छन्। यी सात अवधिहरूमा थप दाखिकर्ताहरूले थप बोनस प्राप्त गर्नेछन्।
यद्यपि कम्पनीले विशिष्ट तथ्याङ्कहरू खुलासा गरेन, तर सूचित microblogging प्रयोगकर्ताहरूले भने, छ कि सात लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि 4600 युआन (710 युआन) इनाम प्राप्त गर्नका लागि, र सबै लक्ष्यहरू पूरा गर्न 8200 युआन (लगभग 1264 युआन) प्राप्त हुनेछ।
प्रवृतिVlogयस हप्ताको सुरुमा, एक लेडलिंग चालकले Weibo मा एक microblogging गरे, सार्वजनिक रूपमा एल। मेजको व्यवहारको निन्दा गरे। बीजिंगमा मुख्यालय, श्री चेनले भने, “चालकहरूले आफ्नो चौथो सत्रमा 380 अर्डरहरू पूरा गर्न आग्रह गरे, र गत हप्ता मात्र 218 आदेशहरू छन्।
आलोचकों ले भन्यो कि लक्ष्य हासिल गर्न असंभव थियो, किनकी चौथो समय चंद्र नव वर्ष संग सम्बद्ध छ, धेरै पसलहरु छुट्टी को कारण बंद भयो।
वसन्त महोत्सव एक छुट्टीको अवधि हो। धेरै मानिसहरू शहरमा बस्छन्, चेन छैटौं साक्षात्कारमा भन्नुभयो। यसको अतिरिक्त, धेरै कम्पनीहरू अझै खोलिएका छैनन्।
तथापि, धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले एलएमईएएस माफी मानेका छैनन्, केही इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले एलमा शंकास्पद छन्। एमईएस इनाम जारी गर्न इरादा छैन।
अर्को हेर्नुहोस्:विशाल Ele. Me एक साथ बीजिंग Daxing अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पठाउनुहोस्
धेरै मानिसहरूको लागि, 8200 युआन हाम्रो मासिक राजस्व को एक सानो भाग हो, तर यी कूरियर छुट्टी को समयमा काम मा जोर दिए। एक माइक्रो ब्लगिङ प्रयोगकर्ताले यसो भने: म अब ई ई.मे प्रयोग गर्दैन।
यो पहिलो पटक कामको अवस्थाको कारण भोजनको लागि आवेदन गरिएको छैन। सेप्टेम्बर 20 20 मा, एक व्यापक रूपमा फैलियोविशेषताहरू(चिनियाँ संग) उद्योगलाई कसरी सख्त डिलिवरी समय विकास गर्न, ढिलो भयो, र छिटो प्रस्ताव अगाडि बढाउने ट्राफिक नियमहरूको उल्लङ्घन पनि। गत महिना, 43 वर्षीया एल। मलाई चालकको मृत्युले अधिक क्रोधलाई बढायो।